Shoppingzụ ahịa na Kildare - IntoKildare
Ndị na-azụ ahịa, Oge mbu, Ihe Ime
Maka ahụmịhe azụmaahịa kachasị, echefula ịkwakọba paspọtụ gị na ịnwa ịdọba obere karama ude mmiri n'ime akpa ụgbọ elu akwadoro tupu ịbanye ụgbọ elu na London ma ọ bụ Paris-Kildare bụ ebe ịzụ ahịa ọhụrụ na maapụ nwere ihe niile ị nwere ike ịchọ na ndị ọzọ.
Ọpụpụ Obodo Nta Kildare
Obere mkpali, wụpụ ma wụpụ site na ebe ọ bụla na Ireland, site n'okporo ụzọ ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè, Kildare nwere ọtụtụ ịzụ ahịa ga -eme ka gị na obere akpa gị na -arụsi ọrụ ike. Onye kachasị n'etiti ndị a, dịka onye ọ bụla zụrụ ahịa maara nke ọma, bụ Ọpụpụ Obodo Nta Kildare nke na -enye ihe ruru 60% kwụsịrị aha ndị nrụpụta.
Na oge ọkọchị nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị enwebeghị ihe ngọpụ ka mma ịpị rọba ahụ wee jiri iberibe ihe mmebe igodo ole na ole melite akwa uwe gị. Bulie ụfọdụ ụdị ejiji na -aga n'ihu na -ele anya n'ụlọ ahịa dịka Anya Hindmarch, Lulu Guinness na Kate Spade, kpụpụ ụkwụ gị na LK Bennett na Kurt Geiger, nye kichin gị kitsch ifuru na Cath Kidston, dochie ime ụlọ gị na Bedeck ma ọ bụ nye gị ụlọ ịsa ahụ na -eche na Molton Brown.
Ọpụpụ Obodo Nta Kildare agbanweela ahụmịhe ịzụ ahịa ya ka ọ bụrụ nka - na -ewepụ nchekasị niile metụtara ịzụ ahịa etiti obodo. Ọpụpụ ahụ ewepụla ihe na-akpasu iwe-akpa-site na ịnye nhọrọ enweghị aka maka € 5 ebe a ga-anakọta ma zụrụ gị n'ụlọ ọrụ ozi ruo mgbe ị dị njikere ịnakọta ha.
Newbridge ọla ọcha 8
Jide n'aka na ị ga -aga njem na Blọ Ọrụ Ọbịa Newbridge Silverwarena Ihe ngosi ihe ngosi Style kwa. Ụlọ ihe ngosi nka, nke nwere uwe nke akụkọ mgbe ochie dị ka Audrey Hepburn na Elizabeth Taylor, ga -akpali nhọrọ ejiji gị. Mgbe ahụ jiri ọmarịcha ụdị Newbridge mara mma na -ere ahịa na ebe a na -eme ihe ngosi.
Ebe Ịzụ ahịa WhiteWater
Ọ bụrụ na ngwa ndị nrụpụta abụghị nke gị, enwere ọtụtụ nhọrọ ịzụ ahịa na Kildare. Were njem gaa na Ebe Azụmaahịa WhiteWater dị nso nwere ụlọ ahịa Debenhams, M&S na H&M, gbakwunyere ihe karịrị ndị na -ere ahịa 60 gụnyere Karen Millen, Zara na Carraig Don.
Ahịa Nka na Ahịa
Ọ bụrụ na ị na -eme mkpọtụ n'ụlọ ahịa, Kildare na -agba ahịa n'ahịa iji mee ka agụụ gụkwuo gị.
Ahịa Naas Country na-eme na Fraịde ọ bụla na nnukwu ụlọ ọgbakọ obodo site na 9.45am-12.15pm ma na-enye nri mpaghara dị ụtọ, achịcha, mkpọchi nka, ifuru na nka. Were mkpagharị na Crookstown Craft Village, mepee Mọnde ruo Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede, wee hụ ndị na-ese ihe na-ese ihe, ndị na-akpụ ite na wiil ha na ndị na-akpa akwa na-eji yarn na-emepụta uwe na ụdị ihe ọma niile ejiri aka mee maka ọrịre.
Ị nweghị ike ime ihe ọjọọ mgbe ị na-azụ ahịa n'ụlọ ahịa ekeresimesi CLIFF dị ịtụnanya na Cliff na Lyons. Ngwaahịa niile bụ ndị Irish mere n'ezie yana sitere na ihe nri nri dị ịtụnanya ruo na ọgwụgwọ spa ụlọ.
Were ndụmọdụ anyị-ị gaghị eme ya niile n'otu ụbọchị wee debe ụlọ n'otu n'ime ọtụtụ B & B nke Kildare, ụlọ nri onwe ma ọ bụ ụlọ oriri okomoko ka ị wee gbasaa na usoro ịre ahịa na ngwụsị izu wee zere ịkwa ụta nke onye zụrụ ya. Ee, ma yie akpụkpọ ụkwụ dị mma!
Ndị na-azụ ahịaOge mbuIhe Ime